Hazard Oo beeniyay warka xanta ah ee sheegayay in uu hishiis hordhac ah la gaaray Real Madrid - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Hazard Oo beeniyay warka xanta ah ee sheegayay in uu hishiis hordhac ah la gaaray Real Madrid
December 6, 2018 at 07:28 Hazard Oo beeniyay warka xanta ah ee sheegayay in uu hishiis hordhac ah la gaaray Real Madrid 2018-12-06T07:28:28+00:00 CAYAARAHA
File photo dated 10-03-2018 of Chelsea’s Eden Hazard.
Xidiga xulka qaranka Belgium iyo kooxda Chlesea ee Hazard ayaa ka hadlay markale xanta suuqa iyo wararka soo ifbaxay maalintii shalay ahayd ku waasoo lagu waramaaye in xidigaan u hishiis hor dhac ah la gaaray kooxda Real Madrid.
Sida ay daabacday Football London Eden ayaa kadib guuldaradii kooxdiisa ku dhacday wax laga weydiyay sida uu ugu biiri karo bisha Janaato kooxda Madrid iyo hadii ay run yihiin hishiisyada Hordhaca ah.
” waxan u maleynayaa in aad iska soo mala awaashay warkaan waayo aniga kal hore ayaan sheegay in aan janaayo mee ugu soconin kooxda, waxan doonayaa in aan halkaan sii ahaado waayo waa leyga jeclahay London oo dhan” ayuu u sheegay saxaafada.
asigoo hadalkiisa sii wata ayuu raaciyay ” Haa waan guuldareesanay inaga ayaana ka shalaayneeno waxa nagu dhacay, waan rajenayaa in aan ka soo kabano qasaaraha na soo gaaray” ayuu ku soo koobay Hazard.
Chelsea ayaa haatan u soo badhigeesa Eden Hazard in uu hishiis cusub u saxiixo kooxdooda waxa uuna ku heli doonaa sanadkii aduun lacageed gaaraayo £15.6m tasoo ka dhigeysa xidiga ugu mushaarka badan Egland.
Lama oga xiliga uu hishiiska saxiixo doono wiilka reer Belgium Balse waxay u badan tahay in uu ku qanci doono mushaaraadkaas loo soo bandhigay.
« Angola: Soomaali Ka Cabaneysa Sharci La’aan
Maurizio Sarri oo si caro leh kaga hadlay guuldaradii xalay kasoo gaartay kooxda Wolves »